galmudugnews.com » Markab dagaal oo burcad badeed keenay Bandarbeyla
Home » WARARKA » Markab dagaal oo burcad badeed keenay Bandarbeyla Markab dagaal oo burcad badeed keenay Bandarbeyla galmudug on
No Comment Views 16284Wararka naga soo gaaraya degmada Bandarbeyla ee gobolka Bari ayaa sheegaya inuu xalay markab dagaal geeyay halkaas 17 qof oo burcad badeed Soomaali ah, kuwaas oo uu horay uga qabtay biyaha Soomaaliya.
Axmed Suleymaan Faarax oo ka mid ah Iskaashatada Kalluumeysiga ee degmada Bandarbeyla ayaa Bar-kulan u sheegay in burcad badeedda la keenay degmada xalay saacaddu markii ay ahayd 10:30 pm.
Ilo xog-ogaal ah ayaa sheegaya in ragga burcad badeedda ah muddo saddex maalmood ah lagu hayay markab dagaal, kaas oo gacanta ku soo dhigay xilli uu soo badbaadinayay doon kalluumeysi oo laga leeyahay dalka Iiraan oo ay burcad badeeddu qafaalaatay.
Bar-kulan uma suuragelin inay ogaato sababta burcad badeedda loo keenay Bandarbeyla iyo dalka laga leeyahay markabka dagaal.
Shaqaalihii la socday doonta oo intooda badan u dhashay dalka Iran ayaa lagu wadaa in loo gudbin doono dalka Yemen.
Popular post by viewDaawo Video Dahir Alasow oo abtirsaday maxaase u galay Dhulbahante iyo Samaroon - 21143 hitsContact US - 19982 hitsHalkaan Dhageyso Madaxweynaha Somalia oo Faroole meel saaray - 19579 hitsDaawo Faysal Cali Warabe oo Wariye amakaag ku riday - 16375 hitsXiriirka ka dhaxeeya burburka qoysaska & kacsi la'aanta - 16188 hitsDaawo gabadh u dhalatay beesha Daarood oo si qatara u hadashay - 14879 hitsDaawo tumashada Marwada Madaxweyne Siilaanyo iyo Madaxtooyada oo noqotay Dance Club - 14340 hitsDukumiinti sira: Akhri Liiska Lacagta Madaxda Dowladda KMG u taal Dahabshiil +Cadadka iyo faahfaahintooda - 14305 hitsDaawo Video jabka Al-Shabaab ee Beledweyne - 14006 hitsDaawo Video Mohamed Kaahin oo dagaalyahanada Garxajis qabteen iyo Siilaanyo oo Habaryoonis u hanjabay - 13781 hitsDaawo tumashada Marwada Madaxweyne Siilaanyo - 12874 hitsDAAWO Fadeexad Siilaanyo oo Baska Dadweynaha ku tegay Hotelkii Istanbul+Boorsada uu xambaarsan yahay. - 12665 hitsDaawo Wareysigii ugu xiisaha badnaa taariikhda oo Faysal Cali Waraabe lala yeeshay - 12620 hitsDilaagii Khaarijiyay Agaasimihii Waagacusub oo Muqdisho lagu dilay - Walaalkii oo seexan La? - 12337 hitsRag ka dhashay Qabiil yar oo bilaabay hab dhaqankii Gaalgalaha 1988-1990 ! - 12067 hitsTopnews:- Dagaalka Farmaajo iyo Ibbi oo Weji qabiil yeeshay. - 11962 hitsDAAWO Fadeexad Siilaanyo oo Baska Dadweynaha ku tegay Hotelkii Istanbul+Boorsada uu xambaarsan yahay. - 11683 hitsXaqiiq Cadeyn Wadata : Kismaayo, Daarood iyo Hawiye yaa dadka deegaanka ah?Faallo Xog iyo xaqiiqo warran ah - 11604 hitsTopnews:- Heshiiskii Kampala oo fashil qarka u saaran iyo Iscasilaadii Farmaajo !! - 11591 hitsDhageyso Sarkaal Mareexana oo Hawiye si xun u caayay - Bashiir Jeneral Dhiin - 11579 hitsLaundring of dollar black Money surges the price of Somaliland shillings - 11463 hitsIla qosol Daawo Faroole maxaa ku dhacay - 11319 hitsWariye qiimeen ku sameeyay sababaha Al-Shabaab uga baxeen Muqdisho - 11255 hitsSheekha ugu weyn Wahaabiyada Daarood oo ku baaqay in cafis la weydiisto Ahlusuna - 11247 hitsDaawo qabyaaladii Reer Puntland oo noqotay dawada Hawiye - 11042 hits Home About